बहिनीको रजस्वला; दाइको पिडा !! | - News Portal in Nepali
न्याथान रायन भण्डारी वि.सं १ माघ २०७६, बुधबार १५:००
रजस्वला भनेर चिनिएको मासिक धर्मको अवस्था एक अनिवार्य जैविक प्रकृया हो । रजस्वलाको सन्दर्भमा देखिने रक्तस्राव नव सिर्जनाको प्रतीक चिह्न हो । प्रत्येक रुखविरुवामा फल लाग्नुपूर्व फूलहरु फुल्दछन् । फूल फुल्नु फल लाग्ने पूर्वावस्थाको परिचायक हो । फल दिने रुखविरुवामा लाग्ने फूलकोपिलाहरु सुन्दर हुन्छन्, पवित्र मानिन्छन् । रजस्वला पनि मानवरुपी उत्तम फल लाग्ने अद्वितीय प्राकृतिक संकेत हो । फल्नु, फुल्नुलाई हर अवस्थामा पवित्र मानिन्छ । सुन्दर पुष्प वृक्षलाई गमलामा कक्षभित्र नै सजाईन्छ । तर मानवरुपी नारी देहमा फुलेको फूल जो नवसिर्जनाको तयारी अवस्थाको मूक अभिव्यक्ति दिन्छ त्यो अपवित्र कसरी हुन्छ ? त्यो अशुद्ध र अस्पृश्य कसरी हुन्छ ?
रजस्वला भएको थाहा नपाएर कुनै वस्तु छोईएमा त्यो अशुद्ध भएको मानिँदैन यहि समाजमा । अनजानमैँ भएपनि अशुद्ध वा विषाक्त वस्तुको सम्पर्कमा आएको वस्तु स्वत: अशुद्ध वा विषाक्त हुन्छ । यसकारण रजस्वला भएकी नारी अस्पृश्य, अशुद्ध र अपवित्र हुन् भनेँ ती अनजानमा छोईएका वस्तुहरु किन अशुद्ध र अपवित्र भएनन् ? यदि त्यसो हो भनेँ त रजस्वला अवस्था अशुद्ध हुँदै भएन ।
लेखक: न्याथन रायन भण्डारी
यद्यपि हाम्रो समाजको अचेतन मनोवृत्तिका कारण रजस्वला अवस्थालाई अस्पृश्य मानेर रुढीबादी सोचहरु वर्वर भएका छन् जसको फलस्वरूप ‘ म स्वस्थ छु’ भनेर गर्व गरिनुपर्ने आत्मचेतना वेवास्ता र उपेक्षाको व्यवहारले गलपासो जस्तै भएको छ । महिला विद्यालय जानबाट बञ्चित छिन्, शिक्षाको ज्योतिबाट विमुख हुन पुगेकी छिन् । उनको पढ्न पाउने हक धमिलो भएको छ । सार्वजनिक सभा, समारोहमा सहभागिता जनाउन एकपटक सोच्नुपर्ने अवस्था छ । रजस्वलाकै कारण घरभन्दा टाढा अँध्यारो गोठमा उकुसमुकुसमय रात बिताउन विवश भएकी छिन् । ज्यान गुमाएकी छिन् । असुरक्षित ठाउँमा वस्नुपरेर बलात्कृत हुनुपरेको छ । हृदयविदारक पीडा खप्नु परेको छ । महिनावारी भएर आमा छाउगोठमा बस्दा घरमा बाबुद्वारा छोरी बलात्कृत हुने समाजमा ति अबोध वालिकाको चीत्कार कसले सुनिदिने ? आफ्नै वरिपरि कुसंस्कार र कुरीतिको दारुण रुप देखेर पहिलो पटक महिनावारी हुँदा ‘म महिनावारी भएँ’ भनेर भन्न साहस सम्म गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
पूजा गर्नुपर्ने, सेवा सत्कार गर्नुपर्ने, स्वागत र सम्मान गर्नुपर्ने रजस्वलाको अवस्थालाई प्रताडना, अपहेलना र घृणाको विषय बनाएको समाजले रजस्वला भएकी नारी पवित्र, शुद्ध र स्निग्ध हुन्छ भनेर नहिच्किचाई कहिले स्विकार गर्नेछ जैविक वास्तविकताको सुन्दर सत्यलाई ?
काश्मिरमा वर्षा र हिमपातसँगै भएका घटनामा ६२ को मृत्यु, २८ बेपत्ता
एक बर्षमा इटहरीमा मात्र एघार युवती बलात्कृत